Fahaizana mandanjalanja - tsy fahita firy ny fanatanterahana ny Plone dia manana pejy an'arivony na an-tapitrisany. Tsy voafehy tsara izany amin'ny ankamaroan'ny rafitra fitantanana atiny.
Rehefa manoratra lahatsoratra bilaogy aho dia toa misy karazana fifandraisana Indiana foana. Tsy misy hafa amin'izany ny plone. Calvin Hendryx-Parker dia mpikambana ao amin'ny birao ao amin'ny Fondation Plone ary eto Fortville, Indiana dia eto. Ny vadin'i Calvin, Gabrielle Hendryx-Parker dia nanangana ilay orinasa enina tongotra enina tamin'ny taona 1999 tao San Francisco ary nafindran'izy ireo teto Indiana ny orinasa mpanadihady iraisam-pirenena. Gabrielle koa dia mitazona MBA amin'ny marketing sy leadership amin'ny EM Lyon, France.
Ny tongotra enina izao dia manana mpiasa 20 mahery ary nanohy nitombo isa indroa isan-taona isan-taona hatramin'ny nanombohany. Fanomezam-boninahitra ny fahaizana sy ny fanampiana omen'izy ireo ny mpanjifany. Six Feet Up ihany koa no mitantana ny Plone Tune-Up Day… hetsika iray isam-bolana, tontolo andro, virtoaly hanampiana ny vondrom-piarahamonina Plone.